Imfuneko yokwahlukana kwesigaba yimbuyekezo ezenzekelayo yento esebenzayo yokuhlawula amandla
Ukwahlulwa kwesigaba yimbuyekezo yamandla akrelekrele asebenzayo ekwahlulwahlulwahlulwa-hlulwe ngezigaba ezintathu kwembuyekezo yokuthintela ukusebenza ngokuzenzekelayo kunye nokwahlulahlulwa kwesigaba sokuhlawulwa ngokuzenzekelayo ngokwempahla yabo. Isigaba esithathu sokuxhotyiswa ngombane ngokuzenzekelayo yi-suita ...
Yeyiphi imisebenzi ekwiqondo eliphantsi yombane wamandla ombane kwisakhi
Amandla okrelekrele amandla ombane aphantsi aqhekeza izixhobo zembuyekezo yamandla asezantsi asebenzayo kulwakhiwo, iyayiqonda indlela entsha yolawulo olusemthethweni kunye nolawulo lwendawo enye; Inkqubo yembuyekezo ineempawu zezixhobo ezingaphantsi, amaqondo obushushu amancinci anyuka ...
Inkqubo yokusebenza kwe-capacitor yamandla
(1) Ukusebenza okukhuselekileyo kwe-capacitor I-capacitor iya kusebenza kumbane ombane. okwexesha, akunakwenzeka ukuba usebenze ngaphakathi kwe-5% yamandla ombane alinganisiweyo; xa idlula amaxesha ali-1.1 ombane olinganisiweyo, kuvunyelwe kuphela ukusebenza kwexesha elifutshane. Nangona kunjalo, kugqithiso lwento ephumayo ...